नेप्से साप्ताहिक अपडेट : अब कता जान्छ बजार ? - Laltin.com
नेप्से साप्ताहिक अपडेट : अब कता जान्छ बजार ?
लाल्टिन डट कम August 27, 2021
यस हप्ता नेप्से बिहीबार ३०९४.०५ अङ्क पुगेर साताको अन्त्यमा -२.७३% साप्ताहिक गिरावट भएको छ। विहिबारको कारोबार रकम रु १३.३१ अर्ब तथा साता भरिमा ४१.३९ अर्बको रहेको छ। यस साता नेप्से परिसुचकमा तीन दिन मात्र कारोबार भएको थियो। यो हप्ता नेप्से ८६ बिन्दुले तल झरेर केही करेक्सन भएको देखिन्छ। लगातार पहिलो हप्ताको बिहीबार देखि घटेको नेप्से यो साताको तीन दिन ब्लायक–क्रो बनाएर हिजो स्पिनिङ टप बनाएको थियो।
कम्पनी अन्तिम कारोबार मुल्य गत हप्ता गिरावट
हाइड्रोपावर इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभेलपमेन्ट कम्पनी ४५०.०० -१२.८९%
खानीखोला हाइड्रोपावर कम्पनी ३९३.०० -१०.८८%
हिमालयन पावर पार्टनर लिमिटेड ६१०.०० -१०.४३%
फर्स्ट माइक्रो फाइनान्स १२००.०० -८.७५%
युनिभर्सल पावर कम्पनी लिमिटेड ५२५.०० -८.७०%
साना किसान विकास बैंक १९८८.९० -८.६४%
रुरु जलविध्युत परियोजना लिमिटेड १६६२.०० -८.३३%
नेपाल हाइड्रो डेभेलपर्स लिमिटेड ७००.०० -७.८९%
हिमालयन उर्जा बिकास कम्पनी लिमिटेड ५४४.०० -७.४७%
लुम्बिनी जनरल इन्स्योरेन्स ८६६.१० -७.२७%
इन्डेक्स ओपनिङ क्लोजिङ परिवर्तन
हाईड्रो पावर ३६७४.४९ ३६८२.८३ -१.८२%
माईक्रो फाईनान्स ५९९२.५९ ५९२८.६९ -०.८६%
ईन्भेस्मेन्ट ११५.२६ ११०.८१ -६.३७%
डेभलप्मेन्ट बैङ्क ६१३१.६६ ५९६०.०१ -२.८२%
म्यानुफ्याकचरिङ तथा प्रोसेसिङ ७४६४.८९ ७१२८.२५ -४.५३%
फाईनान्स ३१२९.९४ ३२६८.५८ ४.६१%
बैङ्किङ् २०८८.६८ २०२५.०७ -२.०५%
जिवन बिमा १८०२४.५८ १८२१३.४२ -२.७२%
निर्जिवन बिमा १४९६२.५४ १४४१५.६३ -२.४४%
म्युचुअल फन्ड १६.८० १६.५८ -१.३७%
होटल तथा पर्यटन ३५७८.३२ ३५५३.४४ -१.४४%
बोलिन्जर ब्याण्ड विश्लेषणले यो हप्ता भोलाटिलिटि एकदमै घट्दै गएको देखाएको छ।अपर र लोवर ब्याण्डको अन्तर १६२.१७ बाट घटेर १५०.७८ पुगेको छ। अपर ब्याण्ड र क्लोजिङ्ग मुल्यको अन्तर पनि घट्दै गएको छ। साताको क्लोजिङ्गमा अपर ब्याण्ड र क्लोजिङ्ग मुल्यको अन्तर १०८.७६ रहेको छ। साथै अपर, बिच र तल्लो ब्याण्ड सबैले समान्तर दिशामा हुँदा अनिश्चितता इंगित गर्छ। मार्केटले अपवार्ड मोमेन्टम भने गुमाएको छ।
गत २० दिनको औसत भोल्युम १५.३६१ अर्ब रहेको छ भने यो साताको भोल्युम औसत भन्दा २ अर्बले कम रहेको छ। यसैगरी एमएसीडी र सिग्नल लाइनको फरक -५.९९०८ देखि -१५.३०४३ मा घटेको छ। एमएसिडि लाइन सिग्नल लाइनको तल हुनाले अपवार्ड मोमेन्टम गुमाएको देखिएको छ र कमजोर अपट्रेन्ड इंगित गरिएको छ।
साताभरी एडीेएक्स ३२.७७ बाट घटेर २८.०२२० पुगेको छ जसले ट्रेण्ड कमजोर रहेको देखिन्छ। साथै हप्ताको सुरुवातका दिनहरुमा ‌+डिएमआई १४ घटेर ३२.७४१५ देखि २६.६२ जसले अपवार्ड ट्रेन्ड कमजोर भएको देखिन्छ र अपवार्ड मोमेन्टम लुज गरिसकेको देखिन्छ। माइनस डिएमआइ‍‍ १४ लाइन साताको पहिलो दिन २२.५० देखि बढेर २७.०८ मा पुगेको छ जसले पनि अपवार्ड मोमेन्टम लुज गरेको अंकित गर्छ।
साताको अन्त्यमा क्याण्डलस्टिक पेटर्न हेर्दा स्पिनिङ टप बनेको देखिन्छ जसले मार्केटमा अनिश्चितता देखाउँछ।
साताभरी भएको ४१.३९ अर्ब कारोबार रकममा ४ अर्बमाथि कारोबार नासा सेक्युरटिज र इम्पेरियल सेक्युरिटिज देखिएको छ जुन ४.७९ र ४.०९ अर्ब रहेको छ। कारोबार रकमको आधारमा टप टेन ब्रोकरको सुचि निम्नानुसार छ।
Previous: मार्केट अपडेट : जलविद्युत क्षेत्र पुनः शीर्ष स्थानमा
Next: नेप्सेको निमित्त सिईओमा निरन्जन फुयाल नियुक्त